BOSCHED! by Tim Walker – Ariel's Style
Be Chic Be Unique | Just another Thiri Tun's site
Fashion Communication and Visual Research
Thi’s Fashion Alliances
Graduation Dress by thi
Sweet & Street Style
Black Swan Queen Series 2
Black Swan Queen Series 1
Wild and Yellow Bride
How to chooseaperfect bag for every body shape
Five kinds of GLAMOUR
Style Charts for Lana Del Rey
Five 60s’ Fashion in Late 2021-2022 Trends
Must Have Items for Size 16 and Overs
Jumpsuits For Plus size Pear Shaped Body
Plus Size Chic; Styling Tips for Flaunting Your Curves
Casual Outfits for Plus Size Men
STREET CHIC FASHION FOR APPLE TYPE (PLUS SIZE BODY)
How to mix prints for your fashionable outfits?
5 Trendy Jeans in 2020 & How to wear it
Scarves Fashion (Part 2)
Scarves Fashion (Part 1)
Keep It Casual : Weekend Wear Chic for Busy Petties
Halloween costume ideas inspired by Tim Burton films
Simple Outfit for Casual Looks
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Wedding Dress ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ…..
Street Dance Fashion! What can we wear?
ထိုင်းမင်းသား Mew Suppasit ရဲ့ လူငယ်ဆန်တဲ့ fashion အတွဲအစပ်များ
Myanmar Article Blog and Look-Book
Eaindra Kyaw Zin Style Look-book
Boho Chic Fashion LookBook
Lookbook of local actress: MOE HAY KO
Look-book of local actress: Nay Chi Oo
The Penthouse; War in Life “Lee Ji Ah” as Shin So Ryun Fashion Look-book
The Penthouse ; War in Life “Kim So Yeon” as “Cheon Seo Jin” Fashion Look-Book
10 Costumes in “The Nutcracker and The Four Realms” Look-book
Look Books of Lee Min Ho; The King : Eternal Monarch
Look books of Jung Eun Chae in the King: Eternal Monarch
Lookbook of Kat Hernandez from Euphoria
“I told Sunset about you” Fashion Lookbook
Lookbook of Cassie Howard from Euphoria
Moon Ga Young ; Find me in your memory’s Look-book
Lookbook of Maddy Perez from Euphoria
Psycho But It’s okay; Seo Ye ji Fashion Look-book
Lookbook of Rue Bennet from Euphoria
Record of Youth; Park So Dam Look-book
Record Of Youth; Park Bo gum Style Look-book
YooA “Bon Voyage” MV Look-book
Lookbook of Jules Vaughn from Euphoria
BlackPink’s “Lovesick Girls” MV Fashion Lookbook
Editorial Article Blog
BOSCHED! by Tim Walker
The Hour London Luxury Plus Size Brand
GUCCI Christmas Campaign
Sophisticated Accessories For Men in 2020/2021
Fashionable Anitta’s costumes in “Me Gusta” – Part 2
Fashionable Anitta’s costumes in “Me Gusta” – Part 1
The Reconstruction: A Visual Album by Gareth Pugh
2020 ရဲ့ VENICE FILM FESTIVAL ကစွဲမက်ဖွယ်ရာ (GLAMOROUS) ဝတ်စုံ၇စုံ
Disney Fairy Tale Wedding Collection of Allure Bridal…..
CHRISTIAN DIOR ရဲ့ HAUTE COUTURE AW20-21 COLLECTIONအား ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် တင်ဆက်ပြသခြင်း
Haute Couture Designer တွေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ collaboration တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ H&M က 2020 အတွက် collaboration ကရော ဘယ် designer တွေနဲ့လဲ
Miss Aniela; “Surreal Fashion” Photograph of Guo Pei collection
Dolce & Gabanna က နောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Alta Moda creation
Dior Spring Summer 2020 Haute Couture show
Johannes Warnke “Windows of Perception” collection
Why You need to Study Fashion History And How
LilayaKosmosDenimArt; Where Art Meets Fashion
Why Women Kill x Katherine Jane Bryant
Nike Flyleather: Nike Presented Some of its Most Sustainable Products Ever
Dior အင်္ကျီတွေကို canvas အဖြစ်အသုံး ပြုခဲ့တဲ့ Estelle Tcha
MOSCHINO: PUT ON A PUPPET SHOW (Spring Summer 2021)
Dolce And Gabbana; Patchwork Collection
Patricia Field X Emily in Paris
စိတ်ပြေလက်ပျောက် အပန်းဖြေရင်း ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ LIFESTYLE YOUTUBE CHANNEL (4) ခု
10 Netflix Series to Boost Your Creativity During New Normal…..
Custom Tailor and Dressmaker Job
The Experience of the Fashion Business Coach
Road to the runway | behind the Scenes
What is the Trashion?
Capsule Wardorbe | Ariel’s Style
Capsule Wardrobe | Ariel’s Style
How to startacapsule wardrobe:aguide for beginners!
By arielthi2020 15/09/2021 15/09/2021
Love Magazine/ UK
Hello… စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ… Editorial လေးတွေအကြောင်း ဝေမျှပေးမဲ့ အစီအစဥ်လေးကနေ ကြိုဆိုပါတယ်…
Editorial ဆိုတာကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုလိုရင်း တစ်ခု (သို့မဟုတ်) အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခုရှိနေတဲ့ ဓာတ်ပုံမျိုးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
Editorial ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အနုပညာနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့သူတိုင်းနီးပါး ရင်းနှီးနေကြမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ Editorial set တစ်ခုဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုမျိုး ကောင်းမွန်ဆန်းသစ်တဲ့ Concept တွေ ထူးခြားတဲ့ Idea တွေ စည်းလုံးတဲ့ Teamwork တွေနဲ့ ရိုက်ကြတယ်ဆိုတာကို ပိုပြီးသိလာစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးကြောင့် ဒီအစီအစဥ်လေးကို မိတ်ဆက်ပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…
အခုပထမဆုံးပြောပြပေးဖို့ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Editorial လေးကတော့ Love Magazine ရဲ့ Spring/Summer 2016 issue အတွက် နာမည်ကျော်ဓာတ်ပုံဆရာ Tim Walker ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ BOSCHED! ဆိုတဲ့ Editorial လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
Photographer : Tim Walker
Editor : Katie Grand
Hair Stylist : Malcom Edwards
Makeup Artist : Sam Bryant
Casting Director : AAMO, Anita Bitton, Rosie Vogel
Model : Anna Cleveland, Conor Newall, Grace Bol, Guinevere van Seenus, Jelle Haen, Kesse Donker, Maartje Convens, Sam Collet, Skye, Yana Dobroliubora
The Garden of Earthly Delights – Hieronymus Bosch (1480-1505)
Editorial set တစ်ခုလုံးရဲ့ Concept ကိုတော့ Tim Walker က နယ်သာလန်ပန်းချီဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Hieronymus Bosch ရဲ့ The Garden of Earthly Delights(1480-1505) ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားကို Concept ယူပြီး ဖန်တီးထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…
ပန်းချီကားမှာ Panel သုံးခုပါဝင်ပြီး First Panel မှာတော့ အာဒံ နဲ့ ဧဝကို ဘုရားသခင်က Paradisiacal Garden ထဲမှာ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာဦးအစကို ပုံဖော်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ ပန်းချီကို ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်… Central Panel မှာတော့ Bosch က လူသားတွေရဲ့ အပျော်အပါးမက်မောကြပုံကို ထူးခြားတဲ့ landscape အနေအထား၊ ဆန်းပြားတဲ့ သတ္တဝါတွေ၊ ကိုယ်တုံးလုံးရုပ်ပုံတွေနဲ့ ရောယှက်ပုံဖော်ထား ခဲ့ပါတယ်… နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Third Panel မှာတော့ ငရဲကို ပုံဖော်ရေးသားထားပြီး ငရဲကျနေသော လူသားများကို နှိပ်စက်နေသော သတ္တဝါဆန်းများကိုလဲ တွေ့မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…
သူ့ခေတ်အခါကထက် အများကြီးခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ Bosch ရဲ့ လက်ရာမြောက်ပန်းချီကားကိုတော့ ယခုလက်ရှိ Museo Nacional Del Prado မှာ ထိန်းသိမ်းပြသထားပါတယ်… Magical Realism ဟန်ကိုမှ Extravagant Staging Style ကို ရောယှက်အသုံးပြရတာ သဘောကျတတ်တဲ့ Tim Walker ကတော့ Central Panel ကို အဓိက Concept ယူထားပြီး ဘယ်လိုဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကြည့်လိုက်ကြ ရအောင်…
Tim Walker ကို ဒီလိုမျိုး Vibrant color တွေ Medieval element တွေကို အသုံးပြုပြီး စိတ်ကူးယဥ်ဆန်ဆန် Surrealistic Setting Design တွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ Tim နဲ့ အချိန်အကြာကြီး Collaboration တွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ Set Designer Shona Heath ပဲဖြစ်ပါတယ်…
နိုင်ငံတကာက နာမည်ကြီးမော်ဒယ်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Anna Cleveland, Conor Newall, Grace Bol, Guinevere van Seenus, Jelle Haen, Kesse Donker, Maartje Convens, Sam Collet, Skye, Yana Dobroliubora တို့ကလဲ ဒီ Editorial လေးကို မူလ Concept မပျက်အောင် အကောင်းဆုံးဖန်တီးပေးခဲ့ကြပါတယ်
ဘယ် Couture Dress တွေ သုံးမယ်ဆိုတာကိုတော့ နာမည်ကြီး Fashion Editor တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Katie Grand က တာဝန်ယူရွေးချယ်ပေးကာ Valentino Couture နဲ့ Collaboration လုပ်ခဲ့ပြီး Dress အချို့ကိုတော့ Set Designer Shona Heath ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်…
နိဗ္ဗာန်နဲ့ ငရဲကြားမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ လူသားတို့ရဲ့ အကောင်းအဆိုး၊ အကျိုးအပစ်တို့ကို အရှိအတိုင်းဖော်ပြထားတဲ့ Bosch ရဲ့ ပန်းချီကားကို မူလရသမပျောက်အောင် Concept ယူထားပြီး Original နဲ့ မတူထူးခြား ကွဲထွက်နေတဲ့အရသာအသစ်ကို ဒီ Editorial Set လေးကနေ ခံစားရရှိစေပါတယ်…
ပန်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အပြာရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်တို့ကို အဓိကသုံးထားတဲ့ မူလပန်းချီကားအတိုင်း အနီးစပ်ဆုံးအရောင်တွေကို ပြန်သုံးထားသော်လည်း အရောင် အနုအရင့်၊ Hue၊ Tint၊ Shade and Tone တို့ကို ပိုင်နိုင်စွာသုံးထားတဲ့အတွကိ Hell and Heaven၊ Sinner and Saint တို့ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ရသကိုလဲ ခံစားရစေပါတယ်…
တစ်ခါတစ်ခါမှာ ဘယ်အရာကကောင်းတယ် ဘယ်အရာကဆိုးတယ်ဆိုတာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားရခက်တဲ့အတွက် အကောင်းနဲ့အဆိုးခြားက နယ်နိမိတ်လိုင်းကို ရောနှောကာ ပုံဖော်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Tim Walker ရဲ့ ဒီ Editorial Set လေးကတော့အခုချိန်ထိ ဝေဖန်ရေးဆရာများနဲ့ အနုပညာကိုလေ့လာသူများအတွက်တော့ ယနေ့အချိန်ထိ ဆွေးနွေးစရာ သဘောကျစရာ အချကိတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာတော့ အမှန်ပါပဲ…
ကဲ ဒီလောက်ဆို Editorial ရဲ့ သဘောတရားလေးကို ပိုပြီး နားလည်သွားကြမယ်ထင်ပါတယ်… နောက်ထပ်လဲ ဘယ်လို Editorial ကောင်းကောင်းလေးတွေကို ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာလဲ စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်…
ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်စေဖို့လဲ Reference ယူထားတဲ့ link လေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်….
CategoriesBlog Editorial Article BlogTagsAriel Style Be Chic Be UniquearielstyleArticleBoschEditorialFashionEditorialPhotoshootStyleTimWalker
PreviousFive kinds of GLAMOUR
NextJohannes Warnke “Windows of Perception” collection
Copyright © 2022 Ariel's Style. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes